Prof Axmed Ismail Samater oo weli ku taagan Mabda’a Somaliweyn iyo Maamulka Somaliland oo aan go’aan kasoo saarin. | warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / June 7, 2013
Wararka laga helaayo Magaallada Hargeysa ee Maamulka Somaliland, ayaa sheegaya in Maamulka Somaliland uu weli ku guuleysan la yahay sidii Prof Axmed Ismail Samater uga saari la haayeen Mabda’a Soomaaliweyn.
Maamulka Somaliland ayaa ku hungaway soo dhawayntii meeqaamka sare ahayd ee ay ku so dhawaysay Prof Samatar iyadoo Prof Samatar aanu wali ka noqon Mabdi’iisii Somaliwayn wuxuuna ka gaws adaygayaa inuu Cadeeyo mawqifkiisa gooni isutaaga Somaliland iyo inuu cadeeyo in Somaliland tahay dal Madaxbanaan oo ka go’ay Somaliya ilaa hada lagama haayo afka Axmed Samatar kalmadahan.
Maamulka Somaliland ayaa waxa ay ka yaaban yihiin qaab dhaqameedka Axmed Ismail Samatar, waxa ayna garwaaqsan yihiin in Proffisorku haysto mabdi’iisii somaliwayn islamrkaana lama dhihi karo Profisorku wuxuu ka noqday Mabdi’iisii Somaliwayn marhadaan laga hayn kalmadaha aynu kor ku soo xusnay.
Ujeedka Somaliland ay u marti galisay Samater ayaa waxa uu ahaa in laga dhaadhacsiiyo Fakirka ah Somliland, balse waxaan weli dhicin inuu carabka ku dhufto Gooni isu taaga ay sheegayaan Maamulka Somaliland.
Hadaba Madaxda Maamulka Somaliland ayaa lagu dhursugayaa inay si degdeg ah uga hadlaan arintan iyado loo baahanyahay in hadii aanu Axmed samatar ka noqon mabdi;iisii dalka laga saaro marhadii aanu aaminsanayn jiritaanka iyo madaxbanaanida somaliland
Q.sugulle mohamoud abdi
June 7, 2013 in Home, warka.
Madaxwaynaha maamulka somaliland siilaanyo oo la kulmay raysalwasaraha ingiriiska David Cameron.
← AKHRISO 5-QODOB), Golaha Wasiirada Xukuumadda Somalia oo Go’aan ka soo saaray Badda Somalia.
FAAH FAAHIN: Qarax Maanta lala eegtay Masuuliyiin ka tirsan Maamulka G/Banaadir →
One thought on “Prof Axmed Ismail Samater oo weli ku taagan Mabda’a Somaliweyn iyo Maamulka Somaliland oo aan go’aan kasoo saarin.”
Janagalle Indhoos says:
sxb waxaa la yırı mooro eeyaad nınkı galo haduusan maalın waa maalyay ama mowqıfkı hore ha taagnaado ama kan danbeba hala jaan qaado waa un nı tegay